China Nnukwu ikike ọka ntụ ọka na-emepụta igwe na rụpụta | Obodo Chinatown
Na ihicha ngalaba, anyị ịmụta ihicha ụdị ihicha technology.it ejikari na-agụnye 2 ugboro sifting, 2 ugboro scouring, 2times de-nkume, otu oge ọcha, 5 ugboro ọchịchọ, 2 ugboro dampening, 3 ugboro magnetik
nkewa na on.Na ihicha ngalaba, e nwere ọtụtụ ọchịchọ usoro nke nwere ike belata ájá ịgba-si igwe na na-ezi na-arụ ọrụ environment.The.The eruba mpempe akwụkwọ nke nwere ike iwepụ ọtụtụ
Nhicha ngalaba adịghị onley kwesịrị ekwesị maka ọka wit dị na mmiri dị ala ma dịkwa mma ọka ruru unyi site na ndị ahịa mpaghara.
Na ngalaba egwe ọka, e nwere usoro anọ iji gwerie ọka wit na ntụ ọka. Ha bụ sistemụ 5-ezumike, sistemụ mbelata 7, sistemụ 2-Semolina na sistemụ ọdụ 2-ọdụ. A na-echekwa ndị na-eme ka ihe nhicha dị ọcha ka inweta semolina dị ọcha zigara Mbelata nke na-eme ka ntụ ọka dị mma site oke oke. The rollers for Mbelata, Semolina, na Tail usoro ndị ezigbo rollers nke na-ọma blasted. Dum imewe ga amụma mkpuchi obere bran weere n'ime bran na ntụ ọka mkpụrụ na-maximized.
N'ihi na nke ọma e pneumatic eweli usoro, dum na nkume igwe nri ihe na-agafere site High mgbali ofufe. Igwe na-egwe ọka ga-adị ọcha ma dịrị ọcha maka nkuchi ọchịchọ.
Ntụ ọka agwakọta ntụ ọka
Ntugharị ntụ ọka na-agwakọta sistemụ ikuku pneumatic, nnukwu nchekwa nchekwa ntụ ọka, sistemụ ngwakọta na ikpochapụta ntụ ọka ikpeazụ.Ọ bụ ụzọ kachasị mma ma dị mma iji mepụta ntụ ọka ahaziri iche ma debe nkwụsi ike nke ntụ ọka. agwakọta ntụ ọka na bins a na-echekwa n'ime ntụ ọka 6 na-ekpochi bins wee jupụta ya akpatre. A ga-agwakọta ntụ ọka ahụ nke ọma mgbe a napụrụ ha ntụ ọka ntụ ọka. iji hụ na ntụ ọka na ntụ ọka na-atara site a nri ike na proportion.The ntụ ọka àgwà ga-abụ mgbe agwakọta usoro nke dị ezigbo mkpa ntụ ọka milling.In mgbakwunye, bran ga-echekwara na 4 bran bins na juru n'ọnụ akpatre.
Ọdụdọ Njikwa na Njikwa
N'akụkụ a, anyị ga-enye kọmpụta na-achịkwa ọkụ eletrik, eriri mgbaama, eriri USB na ọkwa ugo, na akụkụ nrụnye eletriki ndị ọzọ. A naghị etinye mkpụrụ osisi na ike ike ma e wezụga onye ahịa ọ bụla achọrọ. PLC akara sistemụ bụ nhọrọ nhọrọ maka ndị ahịa. Na njikwa njikwa PLC, ihe njikwa niile nke programmụ na-achịkwa nke nwere ike ịkwado igwe na-agba ọsọ nke ọma. Usoro ahụ ga-eme mkpebi ụfọdụ ma meghachi omume n'ụzọ dabara adaba mgbe igwe ọ bụla nwere mmejọ ma ọ bụ kwụsị ihe na-adịghị mma. N'otu oge ahụ ọ ga-eme ka ụjọ wee chetara onye ọrụ ka ọ dozie mmejọ ahụ. Ahịa PLC ga-abụ Siemens, Omron, Mitsubishi na ndị ọzọ International Brand. Nchikota nke ezi ihe emebe na a pụrụ ịdabere na eletriki akụkụ insurance dum igwe ihe na-agba ọsọ were were.
Ike (t / 24h)
Ala Mill Model
Onye Ọrụ Kwa Mgbanwe
Oghere LxWxH (m)
Pneumatic / eletrik